Reddit NoFap မှမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Reddit NoFap ထံမှမေးခှနျးအဖြေ
အစပိုင်းမှာတော့မေးခွန်းတွေဖြေဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အသေအချာမသိခဲ့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြောသမျှအားလုံးကဒီဆိုက်မှာရှိနေလို့ပဲ။ လေ့လာတဲ့စာဖတ်သူတွေ ဆောင်းပါး“ ဒီမှာစတင်ပါ” နှင့်လင့်များအတိုင်းလိုက်နာဒါမှမဟုတ်ထုတ်စစ်ဆေး porn အမေးအဖြေများ နှင့်လင့်ခ်ကိုလိုက်နာပါ, Reddit စာမျက်နှာပေါ်မှာမေးသမျှသောမေးခွန်းများနီးပါးအဖြေကိုရှာပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါကအချို့ကောင်းသောပစ္စည်းများဖန်တီးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့ ၀ ယ်လိုအားဖြင့်၊ သင်၏အများဆုံးမဲပေးသောမေးခွန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်၏အဖြေများဒီမှာပါ။
(Alexanderr, အ RedditNoFap ဖန်တီးသူထံမှ) ထိပ်တန်းဆယ်ပါးမေးခွန်းများ:
1) thejmanjman (188 ရက်) -“ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း” ဆိုတာဘာလဲ။
“ ကျန်းမာသောအစားအစာဆိုတာဘာလဲ” ဟုမေးခြင်းဖြစ်သည်။ YBOP သည်အပြာစွဲစွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးရန်မည်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အဆင့်ကိုသင့်လျော်သည်၊ မသင့်လျော်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင်၎င်းကိုအနည်းငယ်သာကိုင်တွယ်သည် - ကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆိုလမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသလား TL; DR: ဒါကမင်းအတွက်တွက်ချက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်၊ ယောက်ျားတွေယူတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းတွေများတယ်။ သော့ချက်ကသင်၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုမရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ libido အတွက်စွဲလမ်းလိုသောဆန္ဒများကိုအလွယ်တကူမှတ်မိလွယ်အောင်သတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလေ့လာမှုတွင်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ် အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်းနှစ်ခုထက်ပိုသောဆောင်းပါးများ,: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, Fantasy နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော နှင့် လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ။
၂) LifeScope (အသစ် - ၄ ရက်) - လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအားဖြင့်အော်ဂဇင်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှောင့်နှေးစေသဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအော်ဂဇင်ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်သလော။ (ရက်ပေါင်း 90 လောက်ပြောပါ။ )
အထက်ဖော်ပြပါ“ Rebooting” tab၊ အပေါ်မှ“ Porn & ED” tab နှင့် FAQs ကဲ့သို့သောအမေးအဖြေများအပါအ ၀ င်နေရာများစွာတွင်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းပါသည်။ တစ်ဖက်နှင့်အတူပြန်ဖွင့် နှင့် အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုငါ (ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့ဘူး) ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းရှောင်ရှားရပါမည်နည်း
ဒီ site နှင့် rebooting concept တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်သူများအတွက်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည် စှဲမွဲမှု။ စိတ်ထဲအတွက်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ, reboot သူကိုယောက်ျားတွေအမျိုးအစားများရှိ 2:
အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED မှထမြောက်သောသူထံမှအကြံပြုချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘာဝကျကျနောက်တဖန်ပေါ်ပေါက်သည်အထိ masturbate သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်မရရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူကပြောပါတယ်, သူတို့က masturbating စတင်ခဲ့တာရှည်ပြီးနောက်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်စတင်ခဲ့သူကိုယောက်ျားတွေမကြာခဏတစ်ခုရံဖန်ရံခါအော်ဂဇင်နှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရတုန်းပဲတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကာလ၌ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ်သူတို့သွားဖြတ်တဲ့သူ ED, အတူ Young ကယောက်ျားတွေကြာကြာမလိုအပ်ဖို့နဲ့တော်တော်လေးတင်းကျပ်ဖြစ်ရမည်လေ့ရှိပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ:
ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်,
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (ED) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်.
ရှင်းပြအဖြစ် ပြန်ဖွင့်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရှုံးမပေးအဖြစ်နည်းနည်းအဘို့အညစ်ညမ်းတဲ့သူယောက်ျားတွေဟာပိုမိုနက်ရှိုင်းဆုတ်ခွာဝင်ပုံရသည်။ အားလုံးကျော်သူတို့ ပျော့မတရားသောနှင့်နည်းပါးလာ relapses ရှိသည်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါသည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမကြာခဏ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အစွမ်းထက် cue ဖြစ်တယ်, (နောက်ဆုံးတွင်) နောက်တဖန် porn အပေါ် binging မှဦးဆောင်.
အကြှနျုပျ၏ပဓာနနိယာမအလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ porn ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ဆက်လက်လိုလျှင်, ထို့နောက် porn ကိုရပ်တန့်။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ဘာရှာမလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ပါ မ အလုပ်။
3) dakevs (7 ရက်) - reboot ဖြစ်စဉ်ကို“ အရှိန်မြှင့်” ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ dopamine ပမာဏပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဓိကကဏ္-ခွဲများတွင် (လင့်များဖြင့်) ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းသည်။ desensitization နှင့် 2) ာင်း / hypofrontaility။ နှစ်ဦးစလုံးကဏ္ဍများကိုတကယ်စွဲ၏အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်သို့ရ, ငါ, ငါ့ဗီဒီယိုများအတွက်ဖုံးလွှမ်းရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ကွက်လပ်များတွင်ဖြည့်ပါ။
dopamine နှင့် dopamine D2 receptors များကျဆင်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။ အဓိကဆောင်းပါးသည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဓိကအလုပ်မဖြစ်ခြင်း ၄ ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအမျိုးအစားများတွင်ဆယ်လူလာနှင့်ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် dopamine သည်အစမျှသာဖြစ်သည်။ dopamine ပမာဏကိုအခြားစွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ချိန်ကသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ပြောခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း“ မော်ဒယ်အားလုံးမှားတယ်၊ ဒါပေမဲ့တချို့အသုံးဝင်တယ်။ ”
သူတို့အားလင့်များထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း dopamine တိုးမြှင့်ခြင်း, မတရားသောလျော့ကျသွားသည်။ နှစ်ဦးစလုံး dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်-မှတ်ဥာဏ်လေ့ကျင့်ရေးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ကူညီပေးဖို့တိုကျရိုကျ cortex ခိုင်မာစေရန်ပုံရသည်။
ယောက်ျားများစွာအတွက်၊ တကယ့်မိတ်ဖက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုဝါးမျိုရန်ကူညီသည်။ ၇ လကြာအောင်မအောင်မြင်ခဲ့သောထိုလူငယ်လေးအတွက်မူသူ၏ ED ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အသက် ၂၀ - (ED) ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကိုးလလိုအပ်သောကောင်မလေးပြန်ကောင်းလာရန်
၄) RetroYouth - [အပိုင်းကျွန်မ] အခြားအ dopamine လွှတ်လှုပ်ရှားမှုများ (reddit အပေါ် upvoted တဲ့သစ်တစ်ခုအီးမေးလ်, တစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာတံဆိပ်ကိုမြင်လျှင် facebook ပေါ်သစ်တစ်ခုအကြောင်းကြားစာရတဲ့) ကိုလည်း fapping သကဲ့သို့အန္တရာယ်များမှာသင်ယုံကြည်ပါသလား
fapping (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကို“ အန္တရာယ်ရှိသည်” ဟုမယူမှတ်ပါ။ အကယ်၍ မေးခွန်းက“ လူတစ်ယောက်ကအင်တာနက်စွဲစွဲလမ်းနိုင်သလား” ဟုမေးလျှင်၊ - အဖြေပါ ဟုတ်ကဲ့။ ကြည့်ရှုပါ: မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး Porn Include နှင့် အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမှာ -“ငါပြန်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအခြား dopamine ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကော။ ” ငါထင်တာကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့တခြားသူတွေလိုပဲမင်းတောင်းနေတာပဲ။ ဤသည်ကိုယခင်ကဖော်ပြထားသောလင့်ခ်များတွင်ကိုင်တွယ်သည် - desensitization နှင့် အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုငါ (ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့ဘူး) ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းရှောင်ရှားရပါမည်နည်း
လေ့ကျင့်ခန်း၊ ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သဘောသဘာဝရှိအချိန်၊ အောင်မြင်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုစတာတွေကိုတုန့်ပြန်သောကြောင့်သင်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်သည်တစ်နေ့လုံး dopamine ကိုညှစ်ထားကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုမထင်မမှတ်ဟုယူဆသည်) စွဲလမ်းမှ) ။ dopamine သည်အလွန်ကြီးသည်။ မှန်ကန်သောပမာဏရှိသည်။
သဘာဝ dopamine ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်ဘာမှမမှားပါ။ ဒိုးနတ်သောက်သော၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ ကော်ဖီသောက်သောအရက်သမားများပြန်လည်ကျန်းမာလာခြင်းကိုလေ့လာခြင်းမှအခြားစွဲလမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှသက်သာရာရနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
သို့သော်တစ်ချိန်ကအကြီးအကျယ် ထိခိုက် သို့ စွဲလမ်းတွေကိုသင်၏ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်“ စိတ်သက်သာ” သော်လည်းသင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူပြုသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့သူတို့ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကနေပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်တဲ့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်။
[အပိုင်း II ကို] IE dopaminergic - အားလုံး dopamine receptors ကိုတန်းတူဖန်တီးထားသလား။ ညစ်ညမ်းမှုသည် dopamine receptor များကို desensitizes ဖြစ်သောကြောင့် porn သည်လူတို့၏ libidos ကိုအပေးအယူပြုသည်ကိုနားလည်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့သော dopamine ထုတ်လွှတ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ကွဲပြားသောပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများသည်မတူကွဲပြားသော dopamine receptors များကို activate လုပ်ပါသလား။
ပထမဦးစွာ အားလုံးအကြိုးလှုပ်ရှားမှုများအုပ်ချုပ်သောဆားကစ် ထို့ကြောင့်အားလုံးစွဲထပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်စွဲစေနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးသည် D2 နှင့် D1 dopamine receptors အချို့ကိုဝေမျှသည်၊ သို့သော်ဆုလိုင်း circuit ကို activation dopamine receptors ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဘေးဖယ် - သုတေသနအသစ်များကိုဆီသို့ ဦး တည် D1 & D2 receptors ၏ချိန်ခွင်လျှာ ဦးနှောက်အလုပ်မဖြစ်အတွက်သော့ချက်အချက်အဖြစ်။
ထို shared circuits များသည်အခြေခံဖြစ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်းခံစိတ် အခြားအ dopamine-ပြုစုပျိုးထောင်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မတရားသောတိုးမြှင့်ဖို့ဦးတည်းစွဲလမ်းသောဥစ်စာ / လှုပ်ရှားမှုနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်စှဲ, ဆိုလိုသည်မှာ, စွမ်းရည်။ သူတို့ကအစတစ်ဦးချင်းစီမျိုးစုံစှဲအတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြကူညီပေးသည်။
သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုယင်း၏ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသော ဆားကစ်၏ကိုယ်ပိုင်အစု အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ဒါကြောင့်ရေခဲမုန့်ကိုစားတာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့မတူဘူး၊ အဲဒါကရေဆာရင်အနိုင်ရတာနဲ့မတူဘူး၊
ရှုပ်ထွေးမှုမှာမယုံနိုင်စရာဖြစ်သဖြင့်လေ့လာစရာများစွာကျန်ရှိနေသဖြင့်သင်သည် dopamine receptors များထဲသို့ ၀ င်လိုသည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ dopamine receptors အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုစီတွင်မြင့်မားသော or ဦး နှောက်တစ်လျှောက်ရှိဆားကစ်မျိုးစုံတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများတွင်ကျွန်ုပ်ဖုံးလွှမ်းထားသောအမျိုးအစားမှာ D2 receptor များဖြစ်သည် နျူကလိယ accumbens နှင့် septum။ ဤဒေသနှစ်ခုတွင် D2 receptor များကျဆင်းခြင်းသည်adesensitization အတွက်သော့ချက်အချက် (ပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှု numbed) ။
porn-induced ED နှင့် dopamine ကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သီးခြားဆားကစ်များဥပမာတစ်ခုပေးသည်။
ဒါဟာဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲကြောင်းရှင်းပါတယ် D2 receptors လျော့ကျစေပါတယ်, ဒါပေမယ့် ED ကိုမဖြစ်စေဘူး ထို့ကြောင့် dopamine မှီခိုသော circuit တစ်ခုသည်စိုက်ထူမှုအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ရမည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့ hypothalamus ။ The hypothalamus အကျိုးကို circuitry ၏အခြား, အသေးစား, ဒါပေမယ့်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကပါဝင်သည် ကွဲပြားကဏ္ဍများ ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုအစာစားချင်စိတ်, ရေငတ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိုက်ထူ။ အကျိုးကိုဆားကစ်ကနေ Dopamine စိုက်ထူရန်ဦးဆောင်ကြောင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်တဦးတည်းသီးခြားအပိုင်းဖြစ်စေတဲ့, အ hypothalamus အတွက် D2 receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်။
အောက်ခြေလိုင်းသင်ယူဖို့တစ်ခုလုံးအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အကွံဉာဏျ: ဆိုလိုသည်မှာအဘယ်အရာကိုမေမေကသငျသညျပွောမညျ:
ပိုက်ကွန် surfing လျှော့ချရန်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ပါ။ ဒီအစွဲအားလုံးအတု vs. အစစ်အမှန်အကြောင်းပါ။
မြင့်မားသောအဆီ / စုစည်းသကြား junk အစားအစာလျှော့ချပေးပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကအကြံပြုသည် သကြားဓာတ်သည်လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်။
သငျ့လျြောသောအိပ်စက်ခြင်းကိုရယူလိုက်ပါ။ မလုံလောက်အိပ်ပျော်ခြင်း dopamine D2 receptors လျော့ကျ
၅။ SmartSuka (Mod) - သင်ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်အဘို့လိုအပ်အချိန်ပမာဏကိုအတူတက်လာခဲ့တာလဲ ယခုအစပိုင်းမှာ 90 ရက်ပေါင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏မူလတန်းအရွယ်အုပ်စုကိုများအတွက်) 4-5 လအတွင်း?
ငါတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ NoFap သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သင် porn-induced ED အတွက် rebooting account များမှမြင်တွေ့ရသည်မှာ ၄ ပတ်မှ ၉ လနှင့်အထက်အထိရှိသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါသောဓလေ့ထုံးစံများမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်သူကိုယောက်ျားထံမှသာအကြံပြုချက်များ, အစီအစဉ်နှင့်အချိန်မ frame ကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည်။
အစောဆုံး rebooters အားလုံးသည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှမထွက်သောယောက်ျားများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အမြန်နှုန်းမမြန်မီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအင်တာနက်နှင့်အစစ်အမှန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အများစုမှာ ၂ လခန့်အကြာတွင်ဟန်ချက်ညီနေပုံရသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်တို့အများစုသည်ယခုအခါတွင်နှစ်ဆသောဆံပင်ကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်စက်ခလုတ်မှသင်ချိတ်။ ရရုံသာမကစစ်မှန်သောအလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရမည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်သည့်အရှိန်ကိုအရှိန်မြှင့်သည်ကိုလေ့လာရန်များစွာရှိသည်။ဤနေရာတွင်အချို့သောစိတ်ကူးများ), ဤအသှငျပွောငျးသှားအချို့ကိုမှီခိုအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၆) Zansh6n - သငျသညျအဓိကအားဖွငျ့ညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံရသို့မဟုတ်ပါကဤကဲ့သို့သောအလွန်များဗီဒီယိုဂိမ်း, စဉ်ဆက်မပြတ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, compulsive အီးမေးလ်ကစစ်ဆေးခြင်းကို, စသည်တို့အဖြစ်အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် arousal ၏ကြီးထွားပြည်နယ်များမှဆက်စပ်ထားခြင်းအတိုင်းဤတွေ့မြင်ပါသလား
တစ်ခုမှာတစ်ခုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ် အင်တာနက်စွဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်းအင်တာနက် porn စွဲနှင့်အတူ။ သို့သော်ထိုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်များရှိသည်။ အင်တာနက် / ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းမှုသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုသည်အသစ်အဆန်းပါဝင်ပြီးလိင်နှင့်ပတ်သက်သောပတ် ၀ န်းကျင်များကိုပြန်လည်လွင့်စေနိုင်သည်။
စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲအားလုံး၏နောက်ကွယ်ရှိပြproblemနာမှာနာတာရှည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းအရောအနှောသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ Element တွင်အမြန်နှုန်းပါဝင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မသန်စွမ်းမှုအသစ်ဖြစ်သောဝယ်လိုအား၊ သေခြင်းကိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပိုမိုအစွန်းရောက်သောအရာများသို့တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပိုမိုပွင့်လင်းသော tabs များစသည်တို့ကိုပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၇။ နိဂုံး YBOP တင်ဆက်မှု (နှင့် TEDx ဆွေးနွေးချက်) တွင်သင် (ဂယ်ရီ Wilson) ကလူများအတွက်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းပြချက်သည် super-stimulant ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ dopamine receptors အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေပြီးသင့်အားကမ္ဘာကြီးကိုထုံထိုင်းစေသည်။ ငါ porn သည်ဆွေးနွေးခြင်း၏အဓိကပြwasနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိပေမဲ့အခြား super-stimulants များ (ဥပမာ - ခေတ်သစ် junk food) ဥပမာကိုဖော်ပြသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ဆဲလ်ဖုန်းများ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများစသည်တို့ကဲ့သို့သောအရာများကိုစူပါ stimulant (ဤအမျိုးအစားအားလုံးတွင်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌အဆုံးမဲ့အသစ်စက်စက်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါက၊ ဤအရာများအားလုံးသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ dopamine receptors များကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုရေတွက်နေသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် porn ကိုတွန့်ဆုတ်စွာပြုခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမျက်နှာသာပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်လိုက်မှုများကိုကျော်ဖြတ်ကြည့်ပါက၎င်းတို့သည် porn ကဲ့သို့အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လိမ့်မည် အကယ်၍ ဤကိစ္စသည် အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါကအခြားအသုံးပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုမည်သို့ပင်အသုံးပြုပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ dopamine receptors များကိုပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်အချည်းနှီးဖြစ်မည်လား။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကစားခြင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်သွားခြင်းစသည်တို့ကိုသင်မဆုံးဖြတ်ဘဲမနေနိုင်ပါ။ ဒီကိစ္စကမင်းဆီကပြန်ကြားချင်တာပဲ ဖတ်ရန် / တုန့်ပြန်ရန်အချိန်ယူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၎င်းသည်မေးခွန်း ၄ နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ BTW, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်နည်းပညာအားဖြင့်“ လှုံ့ဆော်မှု” ဖြစ်သည်၊ (မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ကဲ့သို့)“ လှုံ့ဆော်သူ” မဟုတ်ပါ။
Porn သည် D2 dopamine receptor အရေအတွက်ကိုမလျှော့ချနိုင်ပါ။ သူကပြောပါတယ်, က၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ် supernormal လှုံ့ဆော်မှု (ဖြစ်နိုင်လျှင်စာရင်းပြုစုသည်) စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝကျသည့်အခြေအနေကိုယိမ်းယိုင်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်လူတစ် ဦး သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း၊ အစာစားခြင်းနှင့်မည်သူ့ကိုမျှစွဲလမ်းခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ McDonald's နှင့် Big Gulps တို့ဖြင့်သင်၏သဘာ ၀ ကျေနပ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး chewy သမင်အသားများနှင့်အမြစ်များနှင့်အလွန်အကျွံစားသုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောဝမ်းကွဲနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းထက် (ဥပမာ - သင်၏မုဆိုးစုဆောင်းရသောဘိုးဘေးဘီဘင်များ) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ မရေမတွက်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောနှင့်ဘရော့ဘန်းအမျိုးမျိုးသော tab များနှင့်အတူတူပါပဲ။
ငါစွဲတာက ဦး နှောက်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်ပြောချင်တယ်၊ သင်အလွန်အကျွံစားသုံးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုရဲ့သဘောသဘာဝမဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော၎င်း၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်အမေရိကန်အသင်းစွဲဆေးပညာသည်အလွန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်,.
သင်၏မေးခွန်းအတွက်အဖြေမှာအထက်ပါနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ Natural ဆုများက circuits များနှင့် dopamine receptors များကိုဝေမျှသည်။ သို့သော်ဆုတစ်ခုစီအတွက်သီးခြား circuit များသို့မဟုတ်အာရုံကြောဆဲလ်များ (အစားအစာ၊ ရေ၊ ဆား၊ လိင်၊ အသစ်၊
အစားအစာ၊ တေးဂီတ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ လိင်စသည့် dopamine spikes များသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဘာမှမမှားကြောင်း ထပ်မံ၍ ပြောကြားလိုပါသည်။ အားလုံးသည် dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်။ အားလုံးစွဲပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်ကူညီ။
သင်၏မေးခွန်းကိုတိတိကျကျဖြေဆိုရန်ယောက်ျားများသည်သင်စာရင်းပြုစုထားသည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နေစဉ်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောသွေးများမှ ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်သူတို့၏အစာစားချင်စိတ်ကိုဘုတ်အဖွဲ့တခုလုံးတွင်ထားရှိခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့သည်။ သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာသည်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းသည်ဤအရာကိုရချင်ကြသည်။ စွဲသည် dopamine D2 receptor များကျဆင်းခြင်းထက်များစွာပိုသည်။ တချို့သုတေသီများကြည့်ပါ ာင်း ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများတွင်“ စွဲလမ်းများ” ဟုခေါ်သောအဓိကစွဲလမ်းစေသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ သင့် ဦး နှောက်အားဝါယာကြိုးမသုံးဘဲ & ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်း - အာရုံခံစားမှုနှင့် Hypofrontality အသေးစိတျအဘို့။
၈) nomoreflap - တစ်ဦး relapse ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်အဘယ်အရာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း? သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် PMO မပါဘဲသို့မဟုတ်ဒါ 70 ရက်ပေါင်းသွားနှင့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်တဦးတည်းတနင်္ဂနွေအတွက်5ကြိမ်နဲ့တူ porn မှပြန်သွားကြသည်နှင့် FAP ။ ဘယ်လောက်ဝေးနောက်ကျောကိုသင်ဆက်ကနဦး relapse ပြီးနောက်ပျောက် PMO ကနေဆက်နေရန်စီမံခန့်ခွဲလျှင်သင်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဘယ်လောက်ဝေးပြန် relapse သငျသညျကိုသတ်မှတ်ကြမည်နည်း
ဦး ဆုံး၊ ငါကစကားလုံးကိုမကြိုက်ဘူး relapse။ ကျနော့်အမြင်တွင်၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှတစ်ဆင့်သွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်စေသည့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကဲ့သို့သောကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုခေါ်ဆိုခြင်းပင်လျှင်ပြန်လည်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ porn ဆိုတာဘာလဲ ဘယ်လောက်အသုံးပြုမှုတစ်ခု "ပြန်ဆုတ်" ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုကြည့်ပါ - အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုငါ (ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့ဘူး) ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းရှောင်ရှားရပါမည်နည်း
တစ် ဦး relapse ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု? မပြောတတ်ဘူး။ သူကနောက်တစ်ခုကိုပြန်တပ်ထားလား၊ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုအတွက်မဆိုထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများကိုပြန်လည်အသက်သွင်းစေသည်။ (ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့် porn တွေကိုဆဲအလုအယက် (ထိခိုက်လွယ်) ဖြစ်ပေါ်သလဲ?) ဒီဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုအတွက်မျှဤအရာကိုမည်သူမျှမလေ့လာခဲ့ပါ။
Porn- စွဲသည်အခြားစွဲလမ်းမှုတွင်မတွေ့ရသောထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများကိုသုတေသနပြုချက်အရသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်မျိုးစုံသော ဦး နှောက်အားဆုိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများတွင် dopamine ကိုဟန့်တားစေသော hypothalamus တွင် opioids မြင့်မားခြင်းနှင့် dopamine အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော androgen receptor များလျော့ချခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ (ကြည့်ပါ အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကြောင့်ယောက်ျားအချို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဘယ်ကြောင့်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်စေကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်။
၉။ VapednBaked (အသက် ၉၀ ကျော် - ၆ ရက်) - စွဲလမ်းမှုမရှိသောသူများနှင့် ED မပါသူများသို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်မှုပြForနာများအတွက်၊ လိင်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်လျှင်အကျိုးရှိပါသလား။ ငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘယ်တော့မှစွဲလမ်းသူတစ် ဦး လည်းမဟုတ်၊ porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အတွက်လုံးဝအရှက်မကွဲခဲ့ဘူး၊ ယုံကြည်မှုတိုးများလာခြင်း၊ testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွားလာခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း (ရိပ်မိလာခြင်း)၊ စသည်တို့ကိုလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ) ဒီအသိုင်းအဝိုင်း spout ပုံရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အထူးသဖြင့်သာမန် (စွဲလမ်းမှုမရှိသော) သူများအတွက် nofap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကားအဘယ်နည်း။
YBOP သည်ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်သောညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးအများစုမှာရှိသည်ဟုယူဆသည်။ ငါ NoFap ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်သုတေသနသတိထားမိပါဘူး။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မတွေ့ပါကသင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်မစတင်မှီမျှမျှတတဖြစ်ခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်သင့် ဦး နှောက်၏မညီမမျှဖြစ်မှုသည်သင်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသည်ဟုမပြောသောယောက်ျားများစွာသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်သူသည်သိသည်, သို့သော်ဤနေရာတွင်အချို့သောအတှေး:
မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောသုတေသနပြုချက်အရစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည်ရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်အပြည့်အ ၀ စွဲနေနိုင်သည့်ဆေးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း dopamine အဆင့်များကိုခွဲခြားထားခြင်းခံရနိုင်သည်။ ၇-၂၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်သာလျှင်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရနိုင်သည်။
အချို့သောယောက်ျားများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်အတွက်စိတ်နေစိတ်ထားများသို့မဟုတ်အမြင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြိမ်ရေများသောအားဖြင့်သုက်လွှတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘုံမှတ်စုအချို့မှာ - ၁)“ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှာခေါင်းမှုတ်ခြင်းနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ ” နှင့် ၂)“ ဤမျှလောက်များလွန်းသောအရာမရှိပါ။ ”
ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံး sexologists အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် "ချိန်ခွင်လျှာ" ရေ, အစားအစာ, နေရောင်ခြည်, လေ့ကျင့်ခန်း, အိပ်ပျော်ခြင်း, သင် - အမည် - က, ဒါပေမယ့်သုတ်ရည်လွှတ်, ၎င်း၏ကြီးမားသောအာရုံကြောဓာတုဆုလာဘ်နှင့်အတူစည်းမျဉ်းကြောင်းစည်းမျဉ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖယ်ထုတ်ပစ်သနည်း
သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ရက်ပေါင်းများစွာယူနိုင်သောရှုပ်ထွေးသော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်“ လိင်စိတ်ကျေနပ်ခြင်း” သို့သုက်ထွက်သောအခါခဏတာပုံမှန်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြား ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ ငါ NoFappers အားလုံးကိုဖတ်ပါရန်တိုက်တွန်းပါသည် အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
ငါ့ကိုလျင်မြန်စွာကြောင်းထည့်သွင်းပါစို့ ငါအကြံပြုမပေးပါ သုတ်ရည်လွှတ် "မကောင်းတဲ့" သို့မဟုတ် "အန္တရာယ်ရှိသော" ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်အခြားဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတိုင်းတာသကဲ့သို့, သုတ်ရည်လွှတ်မှုအတွက်ချိန်ခွင်လျှာအမှတ်တည်ရှိအံ့သောငှါအကြံပြုတာပါ။ တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ သုံးရက်တစ်ကြိမ်၊ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လား? မပြောတတ်ဘူး။ ၁၅ နှစ်အရွယ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကအသက် ၄၀ နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ငါသံသယရှိတယ်။ အဓိကအချက် - စွဲလမ်းမှုမရှိသောယောက်ျားများသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသူအချို့သည်အတိတ်ကာလကအလွန်အကျွံအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည် သူတို့၏ ဦးနှောက်။
သို့မဟုတ်သူတို့သည်အလွန်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းမခံရပါက၊ အတောမသတ်နိုင်သော ၀ တ္ထုအသစ်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သောအမြန်နှုန်းဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းသည်အသက် ၁၁ နှစ်မှစ၍ နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားသော၊ တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်“ စွဲလမ်းမှုမရှိသူ” ၏တင်ပြသောအကျိုးရှိသောအပြောင်းအလဲများ၏နောက်ကွယ်တွင်လား။ ငါဒီဖတ်ဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် post: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း
10) hadySteve - အကယ်၍ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသောဆယ်ကျော်သက်များဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတွင်မည်သည့်အန္တရာယ်မျိုးကိုအများဆုံးတွေ့ရှိရသနည်း။ သို့မဟုတ်လုံလောက်သောနိဂုံးချုပ်ရန်သုတေသနအလုံအလောက်မရှိဘူးလား။
ဤ စိတ်ပညာယနေ့တွင် တိုင် ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောအားနည်းချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘီလီယံနှင့်ချီသောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအသစ်များကိုအသက် ၁၁ နှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခုတ်ထွင်ခြင်းဖြင့်ကလေးများသည်သူတို့၏ဘ ၀ အပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သတ်သောပတ် ၀ န်းကျင်များအားဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်အရသာကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြောင်းလဲစေသောအထောက်အထားများကိုတွေ့ရသည်။ လူငယ်များစွာသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေသည့်အခါအလွန်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုတိမ်းစောင်းနေသောကြောင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့၊ သူတို့ကစွဲလမ်းမှုကနေပြန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှအရသာတွေပြန်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ပါ သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား? အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းသည်။
YBOP သည်အဓိကအားဖြင့် porn-induced ED ကိုကူညီသည့် site တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းကြွေးကြော်သံတစ်ခုမှာ“တစ်ကြိမ်မှာကမ္ဘာကြီးကိုတဦးတည်းစိုက်ထူသိမ်းဆည်းနေသည်။လူငယ်များနှင့်ကျန်းမာသောယောက်ျားများသည်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရရှိနိုင်သည့်သတင်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ (YBOP နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၁၀၀၀ ကျော်မှတဆင့်) ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုသုတေသနသည်ထူးထူးခြားခြားထူးခြားသည့်လမ်းကြောင်းအချို့ကိုအတည်ပြုနေသည်။
ဂျပန် Times ကထံက၎င်း, "ယောက်ျားအသက်အရွယ် 16-19 အတွက် 2008 “ လိင်ကိုမစိတ်ဝင်စား၊ မနှစ်မြို့ကြောင်း” [17.5 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 36.1 အတွက် 2010 ရာခိုင်နှုန်းကို]
2008 ထံမှ: တစ် ဦး တွင်ငါးယောက်မြောက်လူငယ်များသည်“ လိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြပါ"
မြူခိုးဟောင်းကဲ့သို့အသံမြည်ခြင်းကိုငါမုန်းသော်လည်း၊ “ သား၊ ငါကြီးပြင်းလာတုန်းကငါတို့မှာဒီအရာမရှိဘူး။ ” အကယ်၍ သင်သည်လိင်ကိုမကြိုက်ပါက၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုတွင်သင်ကိုကျုံ့ဝင်စေနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်အမေသည်စိတ်ရောဂါကုသရေးဆေးခန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်ခွင်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အဖေသည်တစ်ချိန်ကကျောင်းများတွင်လိင်ပညာပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ယောက်ျားများသည်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်သည်ဟုဆိုကြပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပုံကိုသွား။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကြီးမားသောပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာနေသည့်လက္ခဏာများရှိသော်လည်းအသုံး ၀ င်သောသုတေသနပြုမှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်နေပြီးအများစုမှာဘက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ TEDx ဟောပြောချက်တွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းသောလူငယ်အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏ဘဝအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့မေးမြန်းသနည်းဟူသောမေးခွန်းပုံစံများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မေးခွန်းကသူတို့မပါဘဲဘဝဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးဆိုတာပါ။ နောက်တစ်ခုက "ဆွီဒင်နိုင်ငံကြီးပြင်းလာခြင်းကသင့်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သလဲ" ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်မှန်တီဗွီကြည့်နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ်ဆံပင်ရွှေရောင်ဖြစ်ခြင်း? သုတေသီများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများ၊ အလေ့အကျင့်မရှိသောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများကဲ့သို့သောအဖြစ်များသည့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမမေးပါ။ ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများကိုစနစ်တကျလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသော့ချက်ကိန်းရှင်များကိုသူတို့သီးခြားခွဲထုတ်။ မထားနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး အားအချိန်ကာလတစ်ခုအထိ porn / porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှရပ်တန့်ရန်မတောင်းဆိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NoFap ကဲ့သို့အုပ်စုများကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ဖြစ်စေသည်။
1) apawayacct- လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွင်အမျိုးသားများအတွက်အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း။ ညစ်ညမ်းမှု၊ လိင်မှုကိစ္စပြnotနာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲလိင်စိတ်ကသိသိသာသာကွဲပြားမှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။
ဤမေးခွန်းကိုဒီ site ၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သွားပေမယ့်သင်၌ဆောင်းပါးများအချို့အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များရှာတွေ့စေခြင်းငှါ, ဤအပိုင်းကို.
၂။ QueenOphelia - ငါ့သားသည်“ ဟောပြောချက်” (ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာ) အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သူ့ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းမှုနှင့်မကျန်းမာသောတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမည်သို့သင်ကြားနိုင်မည်နည်း။ သူသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါသူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။
ထိုသူနှစ်ဦးသီးခြားမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ ဖြေဆိုရန်ခက်ခဲတဲ့နှစ်ဦးစလုံး။ ကျနော်တို့ကုသနေကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသည်ဤအကောင်းဆုံးလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ဖြေကြားကြသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအတွက်၊ ကလေးသူငယ်များအားဆုပေးပွဲအစီအစဉ်နှင့်ခေတ်သစ်အမှိုက်ပုံးအစားအစာများ၊ အင်တာနက်အပြာများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ အင်တာနက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများစသည့်သဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပညာပေးရန်အသုံးဝင်သည်။ အခုအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သားလေးကိုကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာ။ နောက်မှကလေးတွေကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးနားလည်ပေးမလဲလို့သူ့ကိုငါမေးတဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်အချို့ပေးခဲ့တယ်။ ဒီဟာကဒီဆလိုက်ရှိုးကိုအတူတကွထားခြင်းဖြစ်တယ်။
Porn အကြောင်းသင်မသိသောအရာ (ကလေးများအတွက်အဓိကဆလိုက်ရှိုး)
ယခုငါထပ်မံလုပ်ပါကအမြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုအလေးပေးပြောကြားလိုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေခြင်းကိုညွှန်ပြသည့်လက္ခဏာများ၊ လက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများဖြစ်သည်။
3) jonathanrex -“ ပျက်ကွက်သော nofap” အပေါ်အဆိုးမြင်သဘောထားသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ကျိန်းသေအန္တရာယ်ရှိသော။ ကျွန်တော့်အတွက် 'fapping' သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ခြေလက် ဦး နှောက်သည်သင့်အား“ ကယ်ဆယ်ရေး” အရင်းအမြစ် (Internet porn) သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင့်အားကူညီသည်ဟုထင်နေကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏အချက်ပြအချက်အလက်များသည်သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
အဲဒီအစားကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တက်ရိုက်နှက်သဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုထက်, ဟာသတစ်ခုသဘောမျိုးစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါကြောင့်ထွက်လေ့ကျင့်ခန်း, စိတ်ဖိစီးမှု-လျှော့ချရေးနည်းစနစ်, လူမှုရေး, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်နှင့်: အခြားအရာတစ်ခုခု, သင်သည်သင်၏ခံစားချက်ထိန်းညှိနှင့်သင့် neurochemistry တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်ကြောင်းပိုကောင်းတစ်ခုခုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်အာရုံပျက်၏အလေ့အထကိုရယူလိုက်ပါ။ ဒီ site မှာများစွာသောအကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ သင်နှင့်အတူစတင်ချင်ပေမည် တစ်ကိုယ်တော် Tools များ.
ဤလေ့လာမှုသည် @ အဖွဲ့ဝင်များမှထိန်းသိမ်းထားသော abstinence ဂျာနယ်များကိုအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။Reboot_Nationမရ။ ၎င်းကိုစူးစမ်းသည်… t.co/w35HwGD65z